Nhau - Nei Uchisarudza US
Isu tinovimbisa, mwero unokodzera wezvigadzirwa ndeye 100%, uye iyo garandi nguva ndeye makore matatu. Gara nechibvumirano uye uzadzise nemwoyo wese zvirevo zvechibvumirano: kuendesa panguva yakakodzera, ziviso inouya nenguva yekuendesa zvinhu kune rimwe bato. kuziva kwebasa, gara wakamira pakureba kwekuda kwevashandisi kudiwa, kumisikidza kwese-mamiriro ekunze kubvunza; Vashandi vekambani yedu kugutsikana kwevatengi seyambiro, mutengi anogara akarurama, sevhisi iri nani chete, hapana chakanakisa, sevhisi haugone kudzoreredza; Ita basa rakanaka rekushanyirwa kwevatengi nenguva, kumbira vatengi maonero, kugadzirisa ruzivo rwechigadzirwa, uye kushingairira kupindura uye nekugadzirisa mhinduro kumatambudziko akasiyana akamutswa nevatengi, kuitira kugadzirisa matambudziko panguva yakakodzera kusvikira vatengi vagutsikana.
Kwayedza maitiro otomatiki:
Yese miedzo inokatyamadza yakanyatsogadzirwa.Iyo kwete chete inovandudza kugona kwebasa, asi zvakare inovimbisa vashandi.
Mazhinji makambani ane mukurumbira senge gridhi yewadhi
Kambani bhizinesi Idea:
Tsvaga musika wakanangana nehunhu, tsvaga kuvandudzwa nekutendeseka; gamuchira nyika nyowani & yepamusoro-soro, gadzira kudyidzana kwekambani, gadzira zita rinotungamira; ita zano remabhirionari epfuma, kuve mukurumbira uye pamberi, mubati wehunyanzvi maererano nemusika mamiriro. Iyo kambani, kuhwina kuvimba kweanozvipira mushandi weboka ane shungu, ungwaru uye kugona, iri kusimukira mhando yepamusoro & yepamusoro sevhisi & yakakwira standard bhizinesi.
Yakavakirwa mhando yepamusoro, ruzivo dhizaini & kugona kugona, kukwikwidza mutengo mukana, Takatengesa zvinhu kuAsia, Europe, America, Middle-East ne Africa, ect, nyika dzinopfuura makumi matanhatu nenzvimbo.
Kana iwe uchifarira zvigadzirwa zvedu, ndapota taura nesu nekukurumidza sezvazvinogona !!!
Kodhi yepositi: 050200